Saosy Info. About. What's This?
"Burger King" dia sampana sakafo iraisam-pirenena iraisam-pirenena izay nivarotra s. Ny fivarotana voalohany 1954, Miami, Florida. Ny iray aminireo tontolonny burger anny kanto manokana indrindra anny Mpanjaka dia Hamburger antsoina hoe "Whopper". Rehefa nanapa-kevitra ny hanitatra ny asany any Aostralia i Burger King, dia fantatrizy ireo fa ny orinasam-pikarakarana sakafo ara-tsakafo no efa nahazatra azy ireo. Raha ny tena izy, ny fombam-pivavahana Aostraliana voalohany anny Burger King Coporation, izay napetraka tao Perth, dia nantsoina hoe Matelaina Jack, nanonona ny anarana ary mahatsa ...
Avy aminny teny frantsay nohagasiana hoe "sauce" ilay teny gasy hoe saosy. Ampiasaina aminny heviny roa farafahakeliny izy io:
Adika ho mitovy hevitra aminny vola ihany koa indraindray ny teny hoe saosy. Raha ny marina ny ihavianilay hevitra dia tsotra: izay manao saosy dia olona manam-bola, noho izany saosy mira vola. Marihina fa ny tanora no tena mampiasa io fomba fiteny io.
Ny saosy izay mitondra ny heviny aminny teny frantsay, izany hoe taharontsakafo natao mba hampatsiro kokoa ny sakafo iray. Ny saosy voatabia no tena fampiasa matetika aminny nahandro malagasy. Misy koa anefa ny saosy hafa, toy ny saosy fotsy, saosy dipoavatra, sns.
tsiron ny aostraliana tasty ary trondro mahafinaritra, anisan izany ny atody, ny Bacon, ny tongolobe ary ny beetroot sy ny hena, saosy ary voatabiha.
amin ny toerana sasany dia antsoina mihitsy hoe vary be menaka na vary be saosy izy io, noho ny atiny: mamono omby na kisoa iray na maromaro mihitsy ny